काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १३९ संक्र मित , कुन कुन ठाउँमा भेटिए हेर्नुहोस् । – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १३९ संक्र मित , कुन कुन ठाउँमा भेटिए हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १३९ संक्र मित , कुन कुन ठाउँमा भेटिए हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार थप १३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौं जिल्लामा मात्र १०९ जना, ललितपुरमा २१ र भक्तपुरमा ९ जना संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आज देशभर ४ सय ८४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बुधबार थप ४ सय ८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससंगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कूल संख्या २४ हजार ४ सय ३२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
हालसम्म कोरोनाबाट १६ हजार ७ सय २८ जना निको भइ घर फर्किका छन्। हालसम्म ६८ प्रतिशत कोरोनाबाट निको भएका छन्। मुलुकभर ७ हजार ६ सय १३ जना सक्रिय संक्रमित छन्। विगत २४ घण्टामा १० हजार ४ सय ८१ जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ।
बुधबार मात्रै नेपालमा ८ जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार वितेको २४ घन्टामा कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट निधन हुने व्यक्तिको संख्या ९१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ३८ सहित देशभर ४ सय ८४ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
१० हजार ४ सय ८१ नमूना परिक्षण गर्दा काठमाडौं जिल्लामा १ सय ९ जना ललितपुर जिल्लमा २१ जना, भक्तपुर जिल्लामा ८ जना र बाँकी अन्य जिल्लामा गरी ४ सय ८४ संक्रमित फेला परेका छन् ।
आज ६४ जनाले मात्र कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । यसरी कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या १६ हजार ७ सय २८ पुगेको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्र`मण र मृ`त्यु दर बढेपछी चीनले लियो चासो,
फ्रिजमा राखिएको माछा र मासुमा २१ दिनसम्म कोरोना भाइरल बाँच्न सक्ने
कपिल`वस्तुका थ`प दुई जना`मा कोरोना भाइ`रस पुस्टि, नेपालमा १०१ नयाँ सं`क्र`मित पुग्यो !!